Qaladkii Ugu Waynaa Ee Uu Mauricio Pochettino U Sameeyay Liverpool Waxa Uu Ahaa In Uu Harry Kane Ixtiraam Badan Siiyay. - Gool24.Net
Qaladkii Ugu Waynaa Ee Uu Mauricio Pochettino U Sameeyay Liverpool Waxa Uu Ahaa In Uu Harry Kane Ixtiraam Badan Siiyay.
Tababaraha kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa kulankii finalkii Champions League waxa uu ixtiraam xad dhaaf ah siiyay gool dhaliyaha kooxdiisa ee Harry Kane oo dhaawac ka soo laabtay kaas oo ka mid ahaa sababihii ay Spurs u guuldaraysatay.
Jurgen Klopp iyo Mauricio Pochettino ayaa isku go’aan ku qaatay in ay shaxahooda ku soo bilaabaan Roberto Firmino iyo Harry Kane oo dhaawacyo ka soo laabtay laakiin waxa uu Klopp noqday tababaraha qaatay go’aankii ku haboonaa markii uu Firmino fashilmay.
Laakiin Mauricio Pochettino ayaa sii waday in uu wali aaminsanaado Harry Kane kaas oo ciyaarta oo dhan fashil ku dhamaysatay isla markaana waxa uu kaydka kaga tagay Lucas Moura oo ahaa xidigii saddexleyda soo dhaliyay kulankii Ajax.
Laakiin xogta laga diwaan galiyay Harry Kane ayaa cadayn buuxda u ah sida uu tababare Mauricio Pochettino ugu fashilmay in uu xidiga reer England dareemo xaalada xun ee uu ku jiray.
Harry Kane ayaa kulankii finalkii Champions league waxa uu kubbada taabtay 26 jeer oo kaliya waana xog ceeb ku ah tababare Mauricio Pochettino oo awoodi waayay in uu ku dhiirado in uu Kane ciyaarta ka saaro.
Virgil Van Dijk iyo Joel Matip ayaa habeenka Harry Kane ka dhigay mid adag oo musiibo ku dhamaaday kadib markii uu waayay hal fursad oo uu xataa goolka Reds ku toogto.
Markii uu Jurgen Klopp daqiiqadii 58 aad ciyaarta ka saarayay Roberto Firmino waxaa la filayay in Mauricio Pochettino laftiisu uu ku dhiiran karo in uu Harry Kane ciyaarta ka saaro balse ciyaarta ayuu u sii daayay.
Lucas Moura ayaa markii uu ciyaarta badal ku soo galay waxa uu helay mid ka mid ah fursadihii ugu fiicnaa ee ay Tottenham ciyaarta ka heshay inkasta oo uu goolhaye Alisson ka badbaadiyay.
Christian Erikson iyo Son ayaa sidoo kale fursado fiican helay balse Harry Kane ayaa gabi ahaanba ku dhex muuqbeelay ciyaarta wuxuuna si layaableh u haystay kalsoonida Mauricio Pochettino oo go’aan adag qaadan kari waayay.
Intii aan la gaadhin finalkii Champions league, khubarada kubbada cagta falanqaysa ayaa sii saadaaliyay in haddii uu Mauricio Pochettino shaxdiisa ku soo bilaabo Harry Kane ay faa’iido u noqonayso Liverpool.
Dad badan ayaa dareemayay in Lucas Moura, Son iyo Dele Alli ay ka saamayn badan lahaayeen haddii ay shaxda Spurs ku soo wada bilaaban lahaayeen.
SIDOO KALE AKHRISO: Waa Kuma Xidiga Haddaba Niyadjabka Ka Muujiyay Mustaqbalkiisa Liverpool Ee Ay Suurtogalka Tahay In Uu Bixi Karaa?
Laakiin waxay u muuqatay in Mauricio Pochettino uu aaminaadii hore ee Harry Kane ku sii adkaystay iyada oo ay suurtogal noqon karto in uu eedayn ka cabsaday haddii uu Kane oo taam ah finalka Champions league uu kaydka dhigo.
Si kastaba ha ahaatee, in Harry Kane uu 11 jeer oo kaliya kubbada taabtay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd wax uu Mauricio Pochettino wax ku fahmi karayay waxaana sidoo kale fashilka Kane markhaati u noqotay in guud ahaan uu 26 jeer kubbada ku taabtay finalkii UCL.